Izaphulelo kwiiMveliso zeKhaya zeKoogeek eAmazon | Iindaba zeGajethi
Izaphulelo zeAmazon kwiimveliso zasekhaya zeKoogeek
U-Eder Esteban | | Amazon, Ikhaya
IKoogeek yenye yezona zinto zithandwayo kwiimveliso zekhaya. Banokhetho olubanzi kakhulu lwezixhobo ezenza ukuba ubomi babasebenzisi bube lula ngalo lonke ixesha. Ukongeza, kulula kakhulu ukusebenzisa iimveliso, ezinokuthi zibekwe kusetyenziso oluninzi. Ukwenza ngcono, kuhlala kukho izaphulelo kuzo, njengoko kunjalo ngoku kwiAmazon.
Sifumene ukhetho lweemveliso zasekhaya zeKoogeek nge izaphulelo ezinkulu kwiAmazon. Ithuba elihle ukuba ubukhangela enye yezi mveliso ukwenza ubomi bakho bube lula kancinci kwaye nekhaya lakho libe krelekrele kancinci. Ukulungele ukufumanisa malunga nezi zibonelelo?
1 Umnyango weKoogeeek / woluvo lwewindows
2 I-Koogeek Smart WI-FI Strip 3
3 IKogegeek yeKrisimesi ye-E27 7W iyancipha
4 I-Koogeek ye-Wi-Fi yokuKhanya okuKhanya ngokuKhanya
5 dodocool Wifi ophindayo
6 dodocool Hub USB 3.0 4 amazibuko
Umnyango weKoogeeek / woluvo lwewindows
Siqala ngenye yeemveliso ezithandwa kakhulu kwi-brand. Inzwa, leyo inokusetyenziswa kwiminyango nakwiifestile ngokulula. Elinye lamaqhosha kuyo kukusebenza kwayo. Kuba inokubekwa emnyango okanye kwiwindows njenge-alam, ukuze ufumane isaziso kwifowuni ukuba kukho intshukumo, nangona kukho ezinye izinto ezisetyenziswayo. Inokubekwa endaweni yokuba xa kuvulwa umnyango isibane sivulwe ngokuzenzekelayo kwela gumbi.
Kwakhona, iyahambelana neApple HomeKit, ukuze ivumele ukusetyenziswa kokukhululeka ngakumbi kubasebenzisi abaninzi. Le nzwa ingasetyenziselwa ekhaya okanye kwishishini ngaphandle kwengxaki. Ngaphandle kwamathandabuzo, enye yeemveliso ezibalulekileyo zorhwebo namhlanje. Kule meko, iyafumaneka ngexabiso le-euro ezingama-19,99 kwiAmazon.
Ukufumana inzwa ngeli xabiso, kuya kufuneka usebenzise le khowudi yesaphulelo: I-BLQK5E66 iyafumaneka de kube ngu-12 kuFebruwari.
Akukho mveliso ifunyenweyoThenga apha »/]
I-Koogeek Smart WI-FI Strip 3
Kwindawo yesibini sesi siqwenga samandla seplagi sithathu, enye yeemveliso ezaziwa kakhulu nezithengisa kakhulu eKoogeek kwintengiso. Zonke izixhobo eziqhagamshela kwesi sixhobo baya kuba nako ukulawulwa kamnandi kakhulu bekude. Ke ngoko, ungazivula okanye uzicime ngaphandle kokuba ubekho ekhaya. Ngokulula ngeapp uya kuba nakho ukuyiphumeza ngaphandle kwamandla.
Ukwenza oku, usetyenziso olukhoyo kwi-iOS kunye ne-Android luya kusetyenziswa. Ukongeza, kunokwenzeka ukulawula eli qhekeza nabanye babancedisi abaziwayo kwimarike enje nge-Alexa okanye uMncedisi kaGoogle, ovumela ukusetyenziswa ngokulula. Ngaphandle kwamathandabuzo, ukukwazi ukucima, ukucima okanye ukucwangcisa izixhobo kude yinto elula kakhulu kwaye inika amathuba amaninzi. Esi siqwenga senza ukuba kwenzeke.
Kule ntengiso kwiAmazon uyakufumana iyafumaneka ngexabiso le-41,99 euro. Kulabo banomdla kuyo, le khowudi yesaphulelo kufuneka isetyenziswe: R47VGLE8 ukuyifumana ngeli xabiso likhethekileyo. Ifumaneka de kube ngu-12 kuFebruwari.
IKogegeek yeKrisimesi ye-E27 7W iyancipha
Imveliso yesithathu kuluhlu yile bulb ye-smart LED, yenye yezona zinto zithengisa kakhulu. Le ibhalbhu yesibane ekrelekrele, enokulawulwa ngokulula umgama. Ngale nto, ungasebenzisa abancedisi abanjengo-Alexa okanye uMncedisi kaGoogle ohambelana nayo. Ke ngoko, inokuvulwa, icinywe okanye amandla ayo ahlengahlengiswe ngendlela elula nangaliphi na ixesha. Nokuba kude.
Ukucwangciswa kwayo kulula, ukongeza, njengoko ibhalbhu ye-LED, ukusetyenziswa kwayo kwamandla kusezantsi kakhulu. Into eza kuqatshelwa kwityala lombane ngokhuseleko olupheleleyo. Amandla okulawula ubungqongqo bawo abunika ubhetyebhetye obukhulu kuzo zonke iintlobo zeemeko. Nokuba uyasebenza, uyatya okanye ubukele imovie, ungayilawula ngokuxhomekeke kwimeko.
Sifumene le bhalbhu kwiAmazon ngexabiso lama-euro angama-23,99, kule ntengiso. Kulabo bafuna ukubanakho ukufumana le bhalbhu ngeli xabiso likhethekileyo, le khowudi yesaphulelo kufuneka isetyenziswe: HBW9DTCK efumaneka kude kube ngu-12 kaFebruwari.
I-Koogeek ye-Wi-Fi yokuKhanya okuKhanya ngokuKhanya
Imveliso elandelayo kuluhlu lolu tshintsho luhlakaniphile nguKoogeek. Njengazo zonke iimveliso zebrendi, inokulawulwa nangaliphi na ixesha usebenzisa usetyenziso kwifowuni, evumela ukusetyenziswa ngokulula kwayo. Ke inokusebenza okanye ingasebenzi xa umsebenzisi eyifuna, ngaphandle kwemfuneko yokuba sekhaya. Iyahambelana nabancedisi abanjengo-Alexa kunye noMncedisi kaGoogle, ukongeza ekusebenzeni kwi-Apple HomeKit.
Oku kuyakuvumela ukuba khanyisa isibane kumgangatho ophezulu ngaphandle kokuya kuloo mgangatho ngokwasemzimbeni. Lukhetho olufanelekileyo ukuphucula ukhuseleko, kuba unokuvula isibane kwaye wenze umntu ekhaya ngaphandle kokuba ubekho ekhaya. Ukucwangciswa kwayo kunye nokusetyenziswa kwayo kulula.
Sifumana olu tshintsho kwi Ixabiso le-euro ezingama-35,99 kolu nyuselo kwiAmazon. Inokufumaneka ngeli xabiso likhethekileyo usebenzisa le khowudi yesaphulelo: QFMOMFY7 efumaneka de kube nguFebruwari 12.
dodocool Wifi ophindayo
Enye yeendlela ezilungileyo phucula uphawu lwe-WiFi endlwini kukusebenzisa into ephindayo. Ke ngoko, le mveliso yedodocool lukhetho olufanelekileyo lokucinga, kuba iyakusivumela ukuba siphucule umqondiso ekhaya okanye eofisini. Lukhetho olufanelekileyo lokujonga ukuba unendlu enemigangatho emibini. Ke umphindisi ubekwe kumgangatho ophezulu, ukufumana isiginali eyomeleleyo kunye nozinzileyo ngamaxesha onke.
Into elungileyo malunga nokuphindayo kukuba isebenza nazo zonke iirouters kwintengiso. Ukucwangciswa kwayo kulula kakhulu kwaye inee-eriyali ezininzi ezinokubekwa ngendlela enqwenelekayo, ukuze umqondiso uzokwandiswa ngeyona ndlela ifanelekileyo kwigumbi. Kulula kakhulu ukuyisebenzisa.
Sidibene no ophindayo kwiAmazon ngexabiso le-10,99 euros. Ukuba ufuna ukuyifumana ngeli xabiso limangalisayo, kuya kufuneka usebenzise le khowudi yesaphulelo: JQRB4O9N efumaneka kude kube ngu-12 kaFebruwari.
dodocool Hub USB 3.0 4 amazibuko
Okokugqibela siyifumana le mini dodocool HUB, ngamazibuko amane ewonke. Olukhetho olufanelekileyo lokusebenzisa kunye nekhompyuter ngexesha apho kufanelekile ukuba ube namazibuko ongezelelweyo, kuba akukho sithuba saneleyo. Ngaphandle kwamathandabuzo, yinto enokuba luncedo kangangezihlandlo ezininzi. Zombini zisetyenziselwa ubuqu kunye nobungcali.
Kule meko, zizibuko ezintathu ze-USB 3.0, ezizezona zisetyenziswa zizixhobo ezininzi namhlanje, eziya kuthi ziququzelele ukusetyenziswa kwale HUB ekhayeni lakho okanye eofisini. Ukongeza, inobungakanani obuncitshisiweyo, ekuvumela ukuba uyigcine ngokulula okanye uyihambise ngaphandle kwengxaki enkulu.
Siyifumana kwiAmazon ngexabiso le-9,09 euro ekwaziseni. Kude kube ngoFebruwari 12 kunokwenzeka ukuba uyifumane ngeli xabiso, okoko le khowudi isaphulelo isetyenzisiweyo: JIL3ERBZ
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Ikhaya » Izaphulelo zeAmazon kwiimveliso zasekhaya zeKoogeek
Umdlalo woMonakalisi womoya, umdlalo odibeneyo kunye needrones ezivela kwiJugetrónica
Ungayibukela njani i-NBA yasimahla kwi-Intanethi